Matio 22 - Ny Baiboly
Matio toko 22
Ny fampakaram-badin'ny zanak'ilay mpanjaka - Ny fandoavan-ketra - Ny hitsanganana amin'ny maty - Ny didy lehibe.
1Dia niteny indray Jesoa nanao fanoharana tamin'ireo hoe: 2Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny andriamanjaka anankiray izay nanao fanasana tamin'ny fampakaram-badin'ny zanany lahy, 3ka naniraka ny ankiziny hanainga izay efa nasaina, ho any amin'ny fampakaram-bady, fa tsy nety nankany ireo. 4Dia naniraka ankizy hafa indray izy nanao hoe: Lazao amin'ny nasaina hoe: Indro efa voavoatra ny nahandro ka efa voavono ny ombiko sy ny zavatra nafahy, ary efa vonona avokoa ny zavatra rehetra, koa tongava atý amin'ny fampakaram-bady hianareo. 5Nefa tsy nahoany akory izany, fa samy lasa nandeha izy, ny iray nankany amin'ny sahany, ny iray nankany amin'ny varony; 6ary ny sasany nisambotra ny ankiziny, ka nony efa notevatevainy dia novonoiny. 7Dia hoy izy tamin'ny ankiziny: Efa voaomana ny fanasana amin'ny fampakaram-bady, fa ny nasaina no tsy mendrika. 8Tezitra ny mpanjaka nony nandre izany, ka naniraka miaramila nandringana izany mpamono olona izany, sy nandoro ny tanànany. 9Koa mandehana hianareo any amin'ny fihaonan-dàlana, ary asao ho atý amin'ny fampakaram-bady avokoa izay hitanareo. 10Dia niely eran'ny arabe ny ankiziny, nanangona izay rehetra hitany na tsara na ratsy, ka hipoka ny mpihinana ny trano fampakarana. 11Ary niditra ny mpanjaka hizaha ny mpihinana, ka nahita lehilahy anankiray tsy niakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady, 12dia hoy izy taminy: Ry sakaiza, nahoana hianao no niditra eto, nefa tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Fa sina ilay olona; 13ka hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony: Afatory ny tongotra aman-tànany, ka ario any amin'ny maizina any ivelany io, any no hisy fitomaniana sy fikitroha-nify. 1414 Fa maro no nantsoina, nefa vitsy no fidina.
15Ary tamin'izay dia lasa ny Farisiana niray tetika hamandrika azy amin'ny teniny. 16Dia naniraka ny mpianany niaraka tamin'ny Herodiana ho any aminy izy ireo nanao hoe: Ry Mpampianatra ô, fantatray fa marina hianao, ary mampianatra ny lalàn'Andriamanitra araka ny marina, ka tsy mampaninona anao ny olona; satria tsy mizaha tavan'olona hianao. 17Koa mba lazao aminay izay hevitrao ny amin'ity: mety va ny mandoa hetra ho an'i Sezara sa tsia? 18Fa Jesoa nahalala ny faharatsiany ka nanao hoe: Ry mpihatsaravelatsihy, nahoana hianareo no maka fanahy ahy? 19Asehoy ahy ny farantsa kely fandoa amin'ny hetra: dia nanasehoany denie iray izy. 20Ary hoy Jesoa taminy: Sarin'iza, sy anaran'iza ity? 21An'i Sezara, hoy ireo. Raha izany àry, hoy izy, dia aloavy ho an'i Sezara izay an'i Sezara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. 22Gaga ireo nony nandre izany, ka nandao azy dia lasa.
23Tamin'io andro io ihany koa dia nisy Sadoseana, izay mandà ny fitsanganan'ny maty, tonga nanatona azy sy nanontany azy hoe: 24Ry Mpampianatra ô, Moizy nilaza hoe: Raha misy lehilahy maty momba, aoka ny rahalahiny hampakatra ny vadiny, mba hiteraka hamelo-maso ny rahalahiny. 25Koa tany aminay nisy olona fito mirahalahy, ary nanambady ny lahimatoa dia maty, ka noho izy tsy niteraka, dia navelany ho an'ny zandriny ny vadiny. 26Ary toy izany koa no nitranga tamin'ilay faharoa sy fahatelo ka hatramin'ny fahafito; 27ary faran'izy rehetra dia maty koa ravehivavy. 28Raha mby amin'ny fitsanganan'ny maty, iza amin'izy fito mirahalahy no ho tompom-bady? fa samy nanambady azy izy rehetra. 29Ary Jesoa namaly ka nanao taminy hoe: Diso hevitra hianareo, satria samy tsy fantatrareo na ny Soratra Masina na ny herin'Andriamanitra. 30Fa raha mby amin'ny fitsanganan'ny maty, dia tsy hisy mpampakatra sy ampakarina intsony; fa ho tahaka ny anjelin'Andriamanitra any an-danitra izy ireo. 31Ary ny amin'ny fitsanganan'ny maty, moa tsy mba novakinareo va ny teny nolazain'Andriamanitra taminareo hoe: 32Izaho no Andriamanitr'i Abrahama, sy Andriamanitr'Isaaka, ary Andriamanitr'i Jakoba? Nefa tsy mba Andriamanitry ny maty izy, fa an'ny velona. 33Gaga ny vahoaka nony nandre izany fampianarany izany.
34Nony ren'ny Farisiana fa nataon'i Jesoa tsy nanan-kalahatra ny Sadoseana, dia nivory izy rehetra; 35ary ny anankiray izay mpahay Lalàna tamin'izy ireo nanontany azy mba haka fanahy azy hoe: 36Ry Mpampianatra ô, inona no didy lehibe indrindra amin'ny Lalàna? 37Ary hoy Jesoa taminy: Tiava ny Tompo Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra, sy amin'ny fanahinao rehetra, ary amin'ny sainao rehetra. 38Izany no didy sady zokiny indrindra no voalohany; 39ary ny faharoa, izay tahaka ny voalohany ihany dia izao: Tiava ny namanao tahaka ny tenanao. 40Ao amin'izany didy roa izany ny Lalàna rehetra sy ny Mpaminany.
41Ary raha mbola nivory teo ny Farisiana, dia nanontanian'i Jesoa hoe: 42Ahoana ny hevitrareo ny amin'ny Kristy? Zanak'iza izy? Zanak'i Davida, hoy ireo taminy. 43Ka nahoana ary Davida, hoy izy tamin'ireo, raha tsindrian'ny Fanahy Masina no miantso azy ho Tompo, fa hoy izy hoe: 44Andriamanitra nilaza tamin'ny Tompoko hoe: Mipetraha eo an-kavanako hianao ambara-panaovako ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao? 45Raha antsoin'i Davida ho Tompony izy, ahoana no maha-zanany azy? 46Tsy nisy nahavaly azy na dia teny iray akory aza; ka hatramin'izay dia tsy nisy sahy nanontany azy intsony. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0415 seconds